बिग बोसबाट कति पारिश्रमिक लिन्छन् सलमान खान ? – Khabar Silo
बिग बोसबाट कति पारिश्रमिक लिन्छन् सलमान खान ?
टिभी रियालिटी सो बिग बोसको १३ औं सिजन केही दिनमा नै सुरु हुने भएको छ । २९ सेप्टेम्बरबाट सुरु हुने भनिएको बिग बोसको सन्चालन यसपटक पनि अभिनेता सलमान खानले गर्ने भएका छन् । त्यसैले यस विषयमा विभिन्न समाचार बाहिर आइरहेका छन् ।
तिनैमध्ये एक समाचार हो सलमानले लिने त्यसको पारिश्रमिक । सलमान खानले पछिल्ला १० वटा एपिसोडमा काम गरिसकेका छन् । यसबीच आएको समाचार के थियो भने सलमान खानले यसपटक ४ सय करोड रुपैयाँ पारिश्रमिकका रुपमा लिँदैछन् ।
तर, पछिल्लो समय फेरि भारतीय रिपोर्टहरुमा यो खबर झुटो भएको समाचार आएका छन् । एक वेबसाइटले चाहिँ बिग बोसको सिजन १३ १५ साता चल्ने र एक साताको सलमान खानले १३ करोड लिनेछन् । यसरी हिसाब गर्दा उनले बिग बोसको यो सिजनमा १९५ करोड लिने त्यो वेबसाइटको दाबी छ ।
मोटी महिलाहरुको सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने
काठमाडौं । धेरै युवतीहरु शरीरको मोटोपना बढ्दा चिन्तित हुन्छन् । यिनै मोटोपना भएका युवतीहरुको सौन्दर्य प्रतियोगिा ‘सुपर प्लस साइज मोडल नेपाल’को तेश्रो सिजन राजधानीमा आयोजना हँने भएको छ । मोडल सङ्स नेपालले ओमानियाको प्रस्तुतीमा ‘सुपर प्लस साइज मोडल नेपाल,२०२०’ सिजन—३ आयोजना गर्न लागेको हो । प्रतियोगितामा १६ देखि ५५ बर्ष उमेर समूहका विवाहित तथा अविवाहित […]
भाइरल बालिका साईलीन श्रेष्ठ र भद्रगोलका बलेको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियो)
नेपाली पार्श्व गायनकी अत्यतै लोकप्रिय गायिका देविका बन्दनाको नयाँ गीत “आँखी झ्यालैमा”को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ।ख्याल ख्यालमा माया बसेको कुरा गरिएको उक्त गीतमा देविकाको साथमा गायक राजेश मर्हजनको पनि स्वर रहेको छ। गीतमा शान्तिप्रियको शब्द र सन्तोष श्रेष्ठको संगीत रहेको छ भने राजन इशानको एरेन्ज रहेको छ। भिडियोमा सागर लम्साल ‘बले’, राशी क्षेत्री, र […]
हाउसफुल ४’को कमेडी ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
विराटनगर १० असोज । ‘हाउसफुल ४’को ट्रेलर रिलिज भएको छ । फिल्मको ट्रेलरलाई युट्युबमार्फत रिलिज गरिएको हो । सार्वजनिक गरिएको ट्रेलरमा फिल्मका हरेक कलाकारहरुको डबल रोल देख्न सकिन्छ । ट्रेलरले निकै कन्फ्युज समेत पार्न सक्छ । ट्रेलरलाई हेरेर फिल्म कमेडी शैलीमा निर्माण भएको बुझ्न सकिन्छ । फर्हाद सम्जीको निर्देशनमा बनेको ‘हाउसफुल ४’ लाई सजिद नाडियवाला […]
दशैंलाई अग्रिम टिकट नदिने साना सवारीले यसरी ठग्छन् यात्रु
दश वर्षमा १० लाख युवा विदेशिए, ६ हजारको मृत्यु